बागमतीमा अबको मुख्यमन्त्री को ?
आश्विन ३, २०७८ ०५:३१:२५
नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा छ । एमाले फुटेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परिसकेकी छिन् ।
एमालेका १२ जना संसदले हिजो माधव नेपाल समुहको नया दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरिसकेका छन् ।
अब ढिलो चाडो गठबन्धनको तर्फबाट नया सरकार बन्ने निश्चित भैसकेको छ । बागमतीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एस मध्यबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने र के कसरी सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्ने बारे केन्द्रमा छलफल चलिरहेको छ ।
अबको मुख्यमन्त्रीमा नेपालि कांग्रेसले पनि दावी गरिरहेको छ भने नेकपा एसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गरेका छन् ।
गठबन्धनका तर्फबाट सातै प्रदेशमा सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर सरकार निर्माण गर्ने र अघिबढ्ने बिषयमा केन्द्रमा छलफल भैरहेको काँग्रेसका बागमती प्रदेशसभा सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जानकारी दिएका छन् ।
'मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसको दावी हो तर अन्य प्रदेशमा हेरेर कसरि सहकार्य सहमति हुन्छ त्यसैमा मिलेर जाने सोचमा छौं', उनले हाम्रा कुरा संग भने ।
उनले प्रदेश १ र बागमती मध्ये कुनै एकमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताए । 'केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ १ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्व भयो भने यहाँ हामि अन्य दललाई साथ् दिन्छौं, त्यहा अन्य दलबाट मुख्यमन्त्री हुनुहुने भयो भने यहाँ हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुनेछ', उनले भने ।
उता एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे प्रदेशमा आफु मुख्यमन्त्रीको दावेदार रहेको बताएका छन् । बागमतीमा त माओवादी पछी कांग्रेस हो नि त ठुलो दल तपाईले दावी गरेर मात्र हुन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, 'अहिले हामि गठबन्धनमा छौ सबै प्रदेशमा मिलाएर सरकार गठन गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो, त्यसैले माओवादीले ३ वटा प्रदेशको नेतृत्व गरेको छ, एउटामा कांग्रेस छ त्यसैले प्रदेश १ मा र यहाँ सहमतिका साथ् सरकार गठन हुन्छ', ।
उता बागमतीका एमाले पछिको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्रको पनि दावी रहेको बताईएको छ । तर कांग्रेस र नेकपा एसले जस्तो खुलेर मुख्यमन्त्रीका लागि दावी भने गरिएको छैन । अन्य प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले बागमतीमा अन्य दललाई नै मुख्यमन्त्री दिनेमा आनाकानी नहुने बुझिएको छ ।
यसरी २ दलको कुरा हेर्दा प्रदेश १ र बागमतीमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी मध्ये एक एकको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने पक्कापक्की भएको छ ।
बागमतीमा हाल १ सय ९ जना सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ५५ सांसद आवस्यक हुन्छ । यस अघि एमाले एक्लैको ५६ जना सांसद थिए । त्यहाबाट १२ जना सांसद निस्किएर नेकपा एसमा गएका छन् ।
प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका २३ जना, नेपाली काँग्रेसका २२ जना, विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपा र नेमकिपाका २-२ जना र एक स्वतन्त्र सांसद् छन् । अब कांग्रेस,माओवादी र नेकपा एस गरि ५७ जनाको सांसद गठबन्धन हुने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, भदौ १६, २०७८, ११:०९:००
हेटौंडामा तास खेलिरहेका ७ जना पक्राउ आश्विन ३, २०७८ 666